Ny smartwatch tsara indrindra, fantatrao ve izany? Miditra! Nohavaozina Oktobra 2021 | Androidsis
Nisy fotoana toa tsy niavaka na naharesy lahatra ny valalabemandry ny ampahany vao natsangana fitaovana vaovao azo ovaina. Raha ny tena izy, mpampiasa maro, anisan'izany ny tenako, no nilaza indraindray fa "ny famantaranandro marani-tsaina dia tsy manao afa-tsy ny mamerina izay ataon'ny finday." Na izany aza, smartwatches dia nivoatra be nanomboka tamin'ireo maodely voalohany ireo, ary na dia mitohy ho tsena vitsy an'isa aza izany smartwatch sinoa tsara indrindra Izy io no mivarotra betsaka indrindra, tena be dia be amin'ny volabe sy ny vola miditra amin'ny sehatry ny smartphone na tablette, ny marina dia tsy mijanona mitombo izany.
Etsy ankilany, na dia Androidsis aza isika dia tsy afaka mandà izany ny fahatongavan'i Apple Watch dia fiovana lehibe. Hatramin'io fotoana io, ny varotra smartwatch dia nitombo tsy an-kijanona, ny ampahany dia noho ny fahalianan'ny orinasa bebe kokoa amin'ny fanolorana safidy hafa ho an'ny mpanjifa, ary ny ampahany noho ny fahalianan'ny mpanjifa manokana amin'ny fitadiavana fomba hafa ho an'ny paoma. Raha mieritreritra ny hahazo ny smartwatch voalohany ianao nefa mbola tsy nanapa-kevitra dia anio dia manolotra safidy miaraka aminay ny sasany amin'ireo smartwatches tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Aza adino izany satria mbola hahita ny mety indrindra aminao ianao.
1 Ny smartwatches tsara indrindra eny an-tsena
1.2 Samsung Gear S3 Classic sy Samsung Gear S3 Frontier
1.3 Huawei Watch 2 ary Watch 2 Classic
1.6 LG Watch Urbane 2eme Gen
2 Mividy smartwatch: toro-hevitra mahasoa sasany
Ny smartwatches tsara indrindra eny an-tsena
Raha tsy misy resaka intsony, andao hanomboka handinika ny sasany amin'ny mety ho ny famantaranandro tsara indrindra na famantaranandro marani-tsaina izay hitanao eo amin'ny tsena ankehitriny. Mazava ho azy fa misy marika sy maodely maro hafa misy noho izay ho hitantsika eto, fa niezaka nifantina ireo izay izahay manolotra kalitao tsara, fampisehoana, famolavolana, sns., nefa tsy mitandrina amin'ny vidiny. Etsy ankilany, aza adino fa eto isika dia miresaka momba ny smartwatches fotsiny, smartband na fehiloha famarana dia tantara iray hafa, na dia fitaovana azo ampitaina ihany koa aza miaraka amina anjara asa iraisana.
Na dia Androidsis ity, androany dia miresaka momba ny famantaranandro marani-tsaina isika, ary tsy afaka mandà ny porofo fa Ny Apple Watch Series 2 dia iray amin'ireo rindrambaiko mahay indrindra eny an-tsena amin'izao fotoana izao.
Manana izany ianao amin'ny habe roa, 38mm sy 42mm, ary misy fehy isan-karazany. Ny mampiavaka azy indrindra dia ny Digital Crown na satroboninahitra dizitaly, ary fampiasa am-paoma miaraka amin'i watchOS ho toy ny rafitra miasa.
ny teboka malemy roa izy ireo amin'ny ankapobeny. Amin'ny lafiny iray, ny fizakan izany, na dia nihatsara aza izany raha oharina amin'ny kinova taloha, ny marina dia handany vola aminao hahatratra ny andro fampiasana, indrindra raha ampiasainao betsaka izany. Avy any an-kafa, mifanaraka amin'ny iPhone ihany, Ka raha mampiasa Android ianao ary tsy mikasa ny hiova dia azonao adino izany.
El Apple Watch Series 2 Izy io koa dia manana accelerometer, gyroscope, sensor tahan'ny fo, sensor light ambient, 8 GB fitehirizana anatiny, batterie 273 mAh, RAM 512 GB, GPS, Bluetooth 4.0, fanoherana ny rano sy vovoka, sns.
Samsung Gear S3 Classic sy Samsung Gear S3 Frontier
Mitsambikina amin'ny mpifaninana lehibe amin'i Apple, Samsung isika, ary ataontsika indroa miaraka amin'ireo rindrambaiko roa malaza indrindra, ny Gear S3 Classic ary ny Gear S3 Frontier.
Ny Samsung Gear S3 Classic dia mampiseho a famolavolana mahazatra sy kanto kokoa miaraka amin'ny efijery 1,3-inch, bateria 380 mAh, fitehirizana 4 GB, 0,75 GB RAM, GPS, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2, gyroscope, accelerometre, barometre, sensor light ambient, tahan'ny fitempon'ny fon'ny sensor, fiarovana amin'ny vovoka sy rano. .. Amin'ny maha rafitra fiasa azy dia mitantana ny Tizen izy, novolavolain'ny orinasa mihitsy, ary azo isaina amin'ny telefaona Android sy iOS.
Eo alohany dia manome ny Samsung Gear S3 Frontier a famolavolana matanjaka sy spaoro kokoa ary raha tsy izany dia mitovy amin'ny maodely Klasika izy io, afa-tsy izay manana fifandraisana LTE, izay mahatonga azy tsy miankina amin'ny finday avo lenta, mety ho an'ny hetsika mampientanentana sy ivelany.
Huawei Watch 2 ary Watch 2 Classic
Ilay mpanamboatra finday avo lenta lehibe indrindra any Shina koa dia manana iray amin'ireo smartwatches tsara indrindra eny an-tsena, izy io no Huawei Watch 2, famantaranandro marani-tsaina izay tonga amin'ny kinova roa izay, toy ny maodelin'ny Gear S3 an'ny Samsung, dia samy hafa amin'ny fisian'ny tsy fisian'ny fifandraisana LTE, ary koa ny endrika sy ny tadiny satria ny Huawei Watch 2 Classic dia misy hoditra. fehin-kibo raha ny Huawei Watch 2 kosa atolotra amina fehikibo plastika.
Samy manana ny famokarana seramika, Fanamarinana IP68 fanoherana ny rano sy ny vovoka ary ampidiro efijery 1,2 santimetatra raha ao anatiny no ahitantsika ny processeur Satroka Snapdragon 2100 Quad-core Cortex-A7 800 MHz, miaraka amina RAM 750 MB, Fitehirizana 4 GB ary a Bateria 420 mAh izay ampanantenain'ny orinasa fampiasana hatramin'ny 7 ora amin'ny alàlan'ny GPS.
Ahoana ny fandehan'ny rafitra miasa Android Wear 2.0 ary mampiditra GPS, NFC, Bluetooth 4.1 ary ireo sensor mahazatra ihany koa izay hitantsika amin'ny famantaranandro hafa. Ah! Ary mifanaraka amin'ny terminal Android sy Android izy io.
Ny iray amin'ireo smartwatches tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ity Asus ZenWatch 3 miaraka amina endrika boribory vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny efijery 1,39-inch arovan'ny Corning Gorilla Glass.
Ao anatiny, ny Asus ZenWatch 3 dia tonga miaraka amin'ny processeur Satroka Snapdragon 2100 miaraka amin'ny RAM 512 MB sy Fitahirizana 4 GB anatiny ary koa a Bateria 340 mAh amin'ny rafitra mamaly haingana (mahatratra 60% ao anatin'ny 15 minitra fotsiny) ary Rafitra fitsitsiana angovo.
Izy io dia manana bokotra ara-batana telo, izay manome endrika tena mahazatra, ary mifanaraka amin'ny iOS sy Android. Manana koa Fanamarinana IP67 fanoherana ny rano sy ny vovoka, Bluetooth 4.1, sensor amin'ny tahan'ny fo, haingam-pandeha ary maro hafa.
Matokia fa tsy nanadino aho. Ny iray amin'ireo smartwatches ankasitrahana indrindra dia ny Moto 360 faha-2 Gen Motorola, ary natomboka tamin'ny taona 2015. Raha ny marina, dia Fitaovana azo fitafy malaza indrindra amin'ny Android Wear ary manolotra famolavolana mitandrina sy voadio kokoa noho ny tamin'ny andiany voalohany.
Anisan'ireo fepetra arahana ara-teknika azontsika atao ny manasongadina fa mampiditra processeur Snapdragon 400 miaraka amin'ny RAM 512 MB sy Fitahirizana 4 GB anatiny, efijery 1,56-inch, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, sensor amin'ny tahan'ny fo, haingana, Bateria 320 mAh y es mifanaraka amin'ny Android sy iOS.
LG Watch Urbane 2eme Gen
Avy any Korea atsimo no ihavian'izany LG Watch Urbane 2 Generation faha-2, iray amin'ireo smartwatches miaraka amin'ny fahaleovan-tena tsaratsara kokoa ary ny famolavolana amin'ny fotoana mitovy mahazatra sy maoderina, ary koa matanjaka. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony, misy efijery 1,38-inch izy io, a Bateria 570 mAh, Fanoherana rano IP67, processeur Qualcomm Snapdragon 400, RAM 768 MB, fitehirizana 4 GB ary fifandraisana LTE.
Ary hatreto dia ny fanangonana ireo smartwatches tsara indrindra misy ankehitriny. Azonay antoka fa maro aminareo no tsy hahita maodely sy marika hafa, ohatra, ny fiambenana Watch Style sy Watch Sport novokarin'i LG ho an'ny Google ary izay no voalohany nampiditra ny Android Wear 2.0 na izany aza, nomena faran'izay kely ny fisian'izy ireo. ny tsena, aleoko ny tsy mampiditra azy ireo.
Na ahoana na ahoana, raha mampiasa smartwatch hafa izay heverinao fa tsara kokoa noho ny iray amin'ireto ianao, na manana sosokevitra hafa, aza hadino ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra eo ambany.
Mividy smartwatch: toro-hevitra mahasoa sasany
Amin'izao fotoana izao dia misy fampiasana roa lehibe ho an'ny smartwatches: mba ho famenony ny fampandrenesana, ny valiny haingana ary ny fangatahana sasany ary indrindra indrindra, manara-maso hetsika ara-batana (dingana natao, halavirana lavitra, tsingerin'ny torimaso, may ny kaloria, ny tahan'ny fo sns).
Ny torohevitro manokana dia raha tsy mpanao fanatanjahan-tena ianao na, farafaharatsiny, nanolo-kevitra ny hiroso amin'ny fomba fiaina mahasalama kokoa izay ahatongavan'ny hetsika ara-batana ho ambony ianao, angamba tsy anao ilay smartwatch. Raha mieritreritra fampandrenesana ianao dia mety ho leo ara-bakiteny amin'ny fihozongozona eo am-pelatananao, miampy ny fameperana azy ireo mba haharetan'ny famantaranandronao farafahakeliny tontolo andro. Ary amin'izany dia miroso amin'ny teboka manan-danja manaraka isika.
Etsy ankilany, eritrereto fa ny smartwatches dia natao ho an'ny fidirana haingana sy fohy, ka voafetra ny fiainana bateria. Mazava ho azy fa ny sasany haharitra ela kokoa noho ny sasany, na ahoana na ahoana, aza manantena mihoatra ny iray andro sy sasany amin'ny fampiasana "normal" ianao, raha tsy hoe ampiasainao kely izy io, fa raha kely no hampiasanao azy, maninona ianao handeha hividy azy?
Ankoatry ny asany sy ny fizakan-tenany, lafiny iray hafa izay tsy tokony hohadinoinao ny azy tanjaka sy faharetana. Na dia tsy manao fanatanjahan-tena tafahoatra aza ianao, dia eo am-pelatanana no misy ilay famantaranandro, toerana mora tohanan'ny fikorontanana sy fikapohana kely izany, noho izany, alao antoka fa ny fitaovana azonao dia mahatohitra araka izay tratra, indrindra ny efijery.
Ary farany, manana ny anton'izany isika compatibilidad. Raha tsy hanova ny smartphone ianao na, farafaharatsiny ny rafitra fiasa, alao antoka fa mifanaraka ilay finday mifantina. Raha misafidy Android Wear ianao dia tsy hanana olana satria mifanaraka amin'ny iOS sy Android, na izany aza, raha lasa tia Apple Watch ianao dia tokony hahazo iPhone ihany koa satria toy ny mahazatra ao Cupertino dia mikatona mafy ny tontolo iainana , miaraka amina ankanavaka madinidinika, ka eritrereto tsara izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny smartwatches tsara indrindra
thyranus dia hoy izy:
Amin'ny alàlan'ny famelana ny android sy ny iOS fotsiny, dia efa nametraka smartwatch misy akanjo Android na tizen aho. Ny famantaranandro Apple dia manana fahasembanana lehibe noho io fetra io.
Valio ny thyranus
Mijanona ao amin'ny Sony Smartwatch 3 aho
Tsy hita i Peeble. Tsy misy olana momba ny fiainana bateria, hatramin'ny 10 andro. Manohitra sy mora vidy.
Ny samsung gear s3 frontier lte 4g dia tsy amidy any Espana. Ny kinova Bluetooth ihany no amidy.
Saingy ny huawei smartwatch 2 miaraka amin'ny 4G dia amidy any Espana, ankehitriny, tsy natolotro teny an-tanako io ary tsy fantatro raha azo alamina, fa mitady fampandrenesana izahay ary afaka mitazona ny bateria raha afaka namboarina ho gprs dia ny ronono satria hampiakatra be ny faharetan'ny bateria ary efa mametraka ny sarintanin'ny google map ny fisintomana ao amin'ny smartwatch satria tokony haharitra ela kokoa ny bateria, azoko atao ny manamarina fa ny 3G sy 4G dia mihinana bateria betsaka indrindra raha ambany ny fandrakofana.
Ny zavatra midina avy any 4G mankany amin'ny grps dia mihoatra ny zava-drehetra mba hampitomboana ny fizakan-tena an'ny bateria, satria ny mandray antso sy ny fampandrenesana dia mihoatra noho izay dia manamboatra tsara ny zava-drehetra isika, manana ny fizakantenanao afa-tsy ianao, eny fa na ireo fampandrenesana mailaka aza amin'ny alàlan'ny fanamafisana fa mampihena ny lohateny fotsiny izany. (Na dia tsy nametraka mailaka tamin'ny smartwatch aza aho raha sendra nandefasana mailaka dia tsy antenaina ny valiny eo noho eo fa valiny amin'ny andro na farafaharatsiny dia heveriko ho toy izany ary io no hitako isan'andro. fototra. any am-piasana, raha maika izy ireo dia matetika mandefa anao ny mailaka izy ireo satria milamina kokoa ny manoratra, indrindra raha mametaka rakitra izy ireo ary avy eo mandefa hafatra avy hatrany aminao hanondroana fa nandefa anao ny mailaka izy ireo mba hahafahanao afaka mijery.
HTC dia manamafy fa ny HTC U11 miaraka amin'ny Android 8.0 dia hanana Bluetooth 5.0
Android 8.0 dia ho tonga amin'ny Google Pixel sy Nexus amin'ny 21 Aogositra